Imaatinka Suuq Gelinta, Saxaafadda, iyo Waxbarashada | Martech Zone
Arbacada, Maarso 8, 2017 Rinjiye Harrison
Xaqiiqda dhabta ah iyo kororka ayaa door weyn ka ciyaari doonta mustaqbalkaaga. TechCrunch saadaaliyay mobilada AR-gu waxay u badan tahay inay noqdaan $ 100 bilyan oo suuq ah 4 sano gudahood! Dhib malahan haddii aad u shaqeysid shirkad tiknoolajiyad goos goos ah, ama qol lagu iibiyo qalabka xafiisyada, meheraddaadu si uun ayey uga faa'iideysan doontaa khibrad suuq-geyn ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya VR iyo AR?
Xaqiiqda Virtual (VR) waa madadaalo dijitaal ah oo deegaanka ku hareeraysan isticmaaleha, halka xaqiiqda la kordhiyay (AR) ay dul dhigeyso walxaha dalwaddii ee dunida dhabta ah.
Ha i aaminin? Fiiri qaar ka mid ah warshadaha horeyba u qaatay VR / AR.
Toddobaadkan CNN wuxuu soo saaray qayb ka mid ah suxufiga VR ee gaarka ah. Kooxdani waxay ku dabooli doontaa dhacdooyinka wararka ugu waaweyn 360 fiidyow waxayna siin doontaa kursi safka hore ah daawadayaasha. Miyaad qiyaasi kartaa inaad ku sugan tahay jiidaha hore ee aag dagaal, inaad leedahay kursi safka hore ah oo ku yaal warbixin soo socota ee Aqalka Cad, ama aad ku dhex taagan tahay isha duufaanta? Taasi waa waxa wariyenimada miisaanka lihi miiska soo saari doonaan, oo noo oggolaan doonta inaan ku dhowaanno sheekada sidii hore. CNN waxay soo saartay cutubka cusub iyadoo daabacday sheeko fiidiyow ah oo VR ah oo daboolaysa orodka dibiyada Spain.
Sannadkii la soo dhaafay, CNN wuxuu tijaabiyay VR, isagoo soo saaray in ka badan 50 sheeko oo warar ah oo muuqaal tayo sare leh leh oo 360 ah, taasoo daawadayaasha siineysa faham qoto dheer oo ku saabsan burburka Aleppo, aragtida safka hore ee Caleemo-saarkii Mareykanka iyo fursad ay kula kulmaan xiisaha hawada sare - wadar ahaan, abuurista in kabadan 30 milyan oo aragti ah oo ah 360 waxyaabaha kujira Facebook oo kaliya. Xigasho: CNN
Lowe's wuxuu daboolayaa sharadkiisa ah in VR ay carqaladeyn karto warshadaha horumarinta guryaha. Waxay bilaabayaan waayo-aragnimo dhab ah oo run ah oo dukaanka dhexdiisa ah oo loogu talagalay inay siiyaan macaamiisha waxbarasho gacan-qabasho ah oo loogu talagalay mashaariicda sida isku-darka madaafiicda ama foornada la dhigo. In tijaabo tijaabo ah Lowe ayaa soo warisay in macaamiisha ay leeyihiin a 36% sifiican ayaa loo xasuustaa sida loo dhamaystiro mashruuca marka loo eego dadka daawada fiidiyoowga Youtube-ka.
Kooxda isbeddelada Lowe waxay ogaadeen in millennials-ka ay ka tagayaan mashaariicda DIY maxaa yeelay waxay ka maqan yihiin kalsoonida hagaajinta guriga iyo waqtiga firaaqada ee mashruuc. Lowe's, xaqiiqda dalwaddii waxay noqon kartaa wado lagu rogo isbedelkaas. Xigasho: CNN
Marka laga eego dhinaca suuq geynta, ereyga suuq geynta gebi ahaanba dib ayaa loo qeexaa. Mid ayaa si fudud ku bilaabi kara inuu qiyaaso inta fursadood ee loo abuuri doono xayeysiinta, meeleynta wax soo saarka, iyo habab hal abuur leh oo lagu soo bandhigo summad. VR waxay xallisaa dhibaatooyin badan oo suuqleyda ah. Waxay na siisaa waddo aan ku abuuri karno khibrad aad u xiiso badan oo saameyn leh, xusuus leh, iyo xiiso leh. Kaliya wax uun kama fiicna taas!
Dhawr xaqiiqooyin oo xiiso leh adiga. Vimeo ayaa hada lagu daray kartida lagu shubi karo laguna daawan karo fiidiyowyo 360-degree ah. Tani waxay siin doontaa filim sameeyayaal iyo hal abuurro kale inay soo bandhigaan oo ay iibiyaan 360 waxyaalood. Yaanan ilaawin facebook sidoo kale. Ilaa maanta waxaa jiray in ka badan hal milyan oo muuqaal ah oo 360-degree ah iyo shan iyo labaatan milyan oo 360-degree ah oo la soo dhejiyay. Ma jirto sabab loo fikiro in isbeddelladani sii socon doonin.
Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikradahaaga ku saabsan mustaqbalka VR / AR. Saameyn intee le'eg ayaad dareemeysaa inay ku yeelan doonto warshadahaaga? Fadlan wadaag!
Tags: CNNimmersivewaxbarashada quusinsuugaanta saxaafaddasuuq geynlowe waaholoroom ayuu hoos u dhigaavimeovimeo 360
Harrison VP ee Horumarinta Ganacsiga ee DK New Media. Waa ganacsade taxane ah iyo suuqgeyn hal abuur leh oo ay soo heleen laba ka mid ah shirkadiisa suuqgeynta, mid si gaar ah iyo mid guud. Harrison sidoo kale waa sawir qaade khibrad badan leh iyo agaasime, oo khibraddan u keenaya xayndaabka isla markaana la socda adeegyadeena kale ee aasaasiga ah. Jacaylkiisu wuxuu ku saabsan yahay dhisidda xiriirro iyo raadinta iskaashiyo hal abuur leh oo diiradda saaraya awoodda iskaashiga, hal-abuurnimada, iyo khalkhalka suuqa.
Waa maxay U-doodista Brand? Sideed Ku Beertaa?